ဤကျဆုံးခြင်းသည်သင်၏ကျပန်းအသွင်အပြင်အတွက်သင်ထည့်သွင်းစဉ်းစားသင့်သော Retro အပိုင်းများ | စတိုင်လ်အမျိုးသားများ
ယနေ့ retro ပုံစံသည်အမျက်ဒေါသဖြစ်သည်။ ရှစ်ဆယ်နှင့်ကိုးဆယ်ရှိသည့်ဖန်ခွက်များထွက်ပေါ်လာသည့်အရာများသည်အလိုချင်ဆုံးအရာဖြစ်သည်အထူးသဖြင့်လူငယ်များကြားတွင်။
အောက်ဖော်ပြပါများသည်သင့်အားကူညီရန်အကြံဥာဏ်ငါးခုဖြစ်သည် မင်းရဲ့ပေါ့ပါးတဲ့အသွင်အပြင်ကိုစတိုင်ကျလှပစေပါတယ် ဒီဆောင်း ဦး ရာသီ / ဆောင်းရာသီ။
ဒီဂျာကင်အင်္ကျီက 80s ကိုသွင်ပြင်လက္ခဏာကြောင်းသောအထည်၏များစွာသောပြန်လည်ကောင်းမွန်။ သငျသညျ retro retro အကျိုးသက်ရောက်မှုပေးခြင်းနေစဉ်စိတ်အေးလက်အေး silhouette ဆွဲကူညီပေးပါရန်အချိုးမညီကော်လာနှင့်အတူတစ် ဦး faux သားရေဂျာကင်အင်္ကျီ။
မစ္စတာပေါ်တာ, € 895
ခြေရာခံဂျာကင်အင်္ကျီများကဲ့သို့နောက်ထပ်တစ်နှစ်ထားရှိမည် မင်းရဲ့အဝတ်အစားတွေကို retro accents တွေပေးချင်တယ်ဆိုရင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရကျိုးနပ်ပါတယ်။ ဒီ Balenciaga အဝတ်အစားဟာအနိမ့်ဆုံးနဲ့အနိမ့်ဆုံးဖြစ်ပြီးအနည်းဆုံးဈေးသက်သက်သာသာနဲ့ပိုင်ဆိုင်ထားပါတယ်။
Tommy Hilfiger, € 129
retro ပစ္စည်းများအတွက် ၀ ယ်လိုအားအလွန်များပြားလွန်းသောကြောင့်အမေရိကန်ကုမ္ပဏီသည် ၁၉၉၀ ပြည့်လွန်နှစ်များအတွင်းစုဆောင်းထားသည့်ချွေးများအချို့ကိုရှင်ပြန်ထမြောက်ပေးခဲ့သည်။ အလွန်အကံျွအလှဆင်ထားသော (ရင်ဘတ်နှင့်လက်မောင်းရှိအလံများနှင့်မက်ဆီအမှတ်တံဆိပ်)၊ ဤချွေးထွက်အင်္ကျီသည်လွန်ခဲ့သောရာစု၏နောက်ဆုံးဆယ်စုနှစ်မှလူအများနှစ်သက်သောအရာအားလုံးဖြစ်သည်.
ဖြောင့်ပြီးချောချောမွေ့သောဂျင်းဘောင်းဘီသည်ယခုနှစ်တွင်ကြယ်ပွင့်များ၏နှစ်ချက်ကိုလက်ခံနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ အဆိုပါ retro နှင့် normcore။ ဒီနောက်ဆုံးဖက်ရှင်ကိုနားလည်ရန်နည်းလမ်းနောက်လာမည့်နွေ ဦး ရာသီအတွက်စုဆောင်းခြင်းများတွင်ကြီးမားသောအခန်းကဏ္ had မှပါဝင်ခဲ့ကြောင်းသတိရပါ။ သင်ကသူတို့ကိုနေရာတိုင်းမှာရှာတွေ့နိုင်မှာဖြစ်ပြီးဂျပိန်နှင့်ပါးလွှာသောမထိုက်မတန်ပုံစံကိုလျှော့ပေါ့ပေးထားသောပုံစံဖြစ်သည်။
Farfetch, € 350
အားကစားဖိနပ်တွင်ဖက်ရှင်တွင်တပ်ဆင်ထားသည့်အားကောင်းသော retro ခေတ်ရေစီးကြောင်းနှင့်လည်းကူးစက်ခံရသည်။ ခွန်အားကောင်းသောမော်ဒယ်များ၊ လေခွင်းဟန်ပြဟန်ဆောင်မှုကင်းမဲ့ပြီးအလွန်အမင်းအလှဆင်သည့်အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုစုဆောင်းလိုသော Adidas မှ Raf Simons မှ Adidas မှ Black Ozweego III ကဲ့သို့သော - သူတို့ကမကြာသေးမီအချိန်များမှာအနာဂတ်နှင့်အနိမ့်ဆန်သောစနီကာများလွှမ်းမိုးထားသည့်ဈေးကွက်တစ်ခုတွင်လမ်းလျှောက်ရန်တောင်းဆိုကြသည်.
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - စတိုင်လ်အမျိုးသားများ » ပုံ » ဤအပိုင်းအစငါးခုပါသောစတိုင် retro accent ကိုရယူပါ